Semalt विशेषज्ञ एक WordPress ब्लग अनुक्रमणिका बाट खोजी ईन्जिनहरु लाई रोक्दै
धेरै व्यक्तिहरूको लागि ब्लग सुरु गर्नुको उद्देश्य सकेसम्म धेरै ट्राफिक हुनु हो। केहि को लागी, यो सपनाको जस्तो देखिन्छ यदि गुगलले आफ्नो सामग्री अनुक्रमणिका गर्छ। यसैले, हामीलाई प्रश्न सोध्छ: किन कोहीले पनि आफ्नो साइट कुनै पनि खोज इञ्जिन द्वारा अनुक्रमित गर्न चाहँदैन?
Semalt का शीर्ष विशेषज्ञ रस बार्बर, यहाँ खोज ईन्जिनलाई तपाईंको वेबसाइट अनुक्रमणिका रोक्नको लागि र ती प्रदर्शन गर्ने तरिकाहरू परिभाषित गर्दछ।
जब सुरू हुन्छ, र ब्लग अझै पनि अपेक्षाकृत ताजा छ, त्यहाँ एक उच्च संभावना छ कि तपाईं साइटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट सामग्री प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि बढ्दै, तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले राख्नु भएको सामग्री उत्तम छैन र यसले अन्य व्यक्तिको चाहना गर्दैन किनकि यसले तपाईंको विश्वसनीयतामा नकरात्मक असर पार्छ। तपाईले सोच्न सक्ने एक मात्र समाधान भनेको गुगलको खोजी परिणाममा देखा पर्न साइटलाई हटाउनु हो जब सम्म तपाईं आफ्नो ब्लगिंग कौशललाई सम्मान गर्नुहुन्न, र अब व्यक्तिहरू तपाईंको साइटमा पहुँच गर्नका लागि तयार हुँदैनन्। निम्न तरिकाले यो कसरी गर्ने भन्ने बारे केही विधिहरू छन्:
चरण १. अनुक्रमणिका वर्डप्रेसबाट खोज इञ्जिनहरूलाई हतोत्साहित गर्नुहोस्
यसको पछाडिको विचार भनेको खोज ईन्जिनहरूलाई साइट पहिलो स्थानमा क्रल गर्नबाट रोक्नको लागि हो। त्यहाँ दुई विधिहरू छन् जुन एकले प्रयोग गर्न सक्दछ:
विधि १: WordPress मा इनबिल्ट सुविधा छ जुन खोज ईन्जिनहरूलाई साइट क्रल गर्नबाट रोक्छ।
WordPress मा प्रशासन भाग खोल्नुहोस् र सेटिंग्स क्षेत्रबाट "पठन" चयन गर्नुहोस्। "खोज इञ्जिन दृश्यता" मा, त्यहाँ एक चेकबक्स छ जसले प्रयोगकर्तालाई "साइटलाई अनुक्रमणिका गर्न खोज इञ्जिनहरूलाई हतोत्साहित गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ।" एकचोटि तपाईंले यो बाकस जाँच गर्नुभयो, बचत क्लिक गर्नुहोस् र बाहिर निस्कनुहोस्।
विधि २: यदि तपाईं अधिक म्यानुअल दृष्टिकोण रुचि गर्नुहुन्छ भने, रोबोट्स.टी.टी.टी. लाई सम्पादन गर्नु तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो।
वेबसाइट फाईलमा robots.txt फेला पार्नुहोस् जुन तपाईं फाईल प्रबन्धक मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। सिन्ट्याक्स प्रयोग गर्नुहोस् (प्रयोगकर्ता-एजेन्ट: *, इन्टर थिच्नुहोस्, र अस्वीकार गर्नुहोस्: /) साइट सर्न रोक्न खोज ईन्जिनहरू राख्न।
चरण २. पासवर्ड संरक्षण
खोज ईन्जिनहरू र क्रॉलरहरूले साइटमा पासवर्ड-सुरक्षित फाइलहरू पहुँच गर्न सक्दैनन्। पासवर्डहरू सिर्जना गर्न निम्न विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
विधि १: होस्टिंग सेवाहरूको पासवर्ड सुरक्षित डाइरेक्टरी उपकरण सुविधा छ जुन प्रयोग गर्नको लागि एकदम सरल छ। होस्टिन्जर र cPanel धेरै समान प्रक्रियाहरू छन्।
एक पटक होस्टिंग कन्ट्रोल प्यानलमा, आइकन पत्ता लगाउनुहोस् एक निर्देशिका सुरक्षित गर्न विकल्पको साथ। बटनमा क्लिक गर्दा, नयाँ विन्डो फाईलहरूको सूचीको साथ देखा पर्दछ, जहाँबाट तपाईं "public_html" चयन गर्नुहुन्छ। "सुरक्षा" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र बाहिर निस्कनुहोस्।
विधि २: तपाइँ वर्डप्रेस प्लगइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि वर्डफेंस, वा पासवर्ड संरक्षण समान परिणामहरू प्राप्त गर्न। निश्चित गर्नुहोस् कि यसलाई स्थापना गर्नु अघि यो अप टु डेटमा छ। स्थापना पछि, साइटको लागि पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्, र सबै चीजहरू क्रलबाट सुरक्षित रहनेछ।
चरण Google. Google बाट एक अनुक्रमित पृष्ठ हटाउँदै
यस्तो समय हुन्छ जब गुगलले मालिकको ईच्छाको बिरूद्ध साइट सूचीबद्ध गर्दछ। यसलाई उल्टाउने एउटा तरिका छ, तर पहिले अनुक्रमणित साइटको लागि गुगल खोजी कन्सोल स्थापना गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले हटाउन चाहानुभएको वेबसाइटमा निर्णय गरेपछि, "गुगल अनुक्रमणिका" ट्याब मुनि "यूआरएलहरू हटाउनुहोस्" मा हेड गर्नुहोस्। खाली बक्समा प्रदान गरिएको, साइटको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र जारीमा क्लिक गर्नुहोस्। पृष्ठ क्रॉलिंगबाट अस्थायी लुकाउन छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि अनुरोध सबमिट गर्नुहोस्।
यसले फरक पार्दैन कि तपाईले खोज ईन्जिनलाई साइटमा क्रल गर्न र इन्डेक्सिंग गर्न रोक्न किन कारणहरू छन्। प्रदान गरिएका चरणहरूले तपाईंलाई त्यो प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। केहि राम्रो परिणाम दिन सक्दैन तर उद्देश्यको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।